How'd it happen and more reports?: Network Engineer ဖြစ်ချင်နေသူတွေအတွက် အမိမြေက RHC TECHNOLOGIES သင်တန်း
Network Engineer ဖြစ်ချင်နေသူတွေအတွက် အမိမြေက RHC TECHNOLOGIES သင်တန်း
Consulting to becomeaNetwork Engineer
- junior network engineer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်ရဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ...
- certifications တွေလည်း ဖြေပြီးပေမဲ့ အလုပ်မရသေးတာ ဘာကြောင့်လဲ ... -
- ဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲ ...
- ကိုယ် study လုပ်နေတာတွေဟာ ပုံစံမှန်ရဲ့လား ...
- ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ knowledge တွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား ...
အစရှိတာတွေကို ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် အခမဲ့ ဆွေးနွေးပေးပါမယ် ...
- ကျွန်တော်တို့ စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အလုပ်ရအောင် ဘယ်လို train ခဲ့သလဲ ... တစ်ချို့ သူတွေ career ကို ပြောင်းသွားအောင် ဘယ်လို train ခဲ့သလဲ ... သူတို့ဆီကနေ ဘာတွေ အတွေ့အကြုံ ရခဲ့သလဲ ...
အစရှိတာတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး စင်ကာပူမှာ အလုပ်ဘယ်လိုရနိုင်သလဲ ... မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်ဘယ်လိုရနိုင်သလဲဆိုတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ training သက်တမ်း ၄ နှစ်ကျော် ၅ နှစ်တာ ကာလ ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးပေးပါမယ် ...
Date :6- Dec - 2014
Time : 11am - 12pm ( 1 hour )
Place : RHC ( Yangon ) Office
Register : RHC ( YANGON ) : 09 - 731-75881
Sai Linn Thu ( Team RHC )
ကျွန်တော်တို့ Team RHC အနေနဲ့ Burmese Next Generation Networkers များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ASA Firewall Specialist Course ကို စတင်သင်ကြားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Industry လိုအပ်ချက်နဲ့ အညီ Course Outlines နဲ့ Lab များကို သေချာစွာ ရေးဆွဲထားပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိစွာ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
စုစုပေါင်း Lab 44 ခု ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Team RHC ကိုယ်တိုင် လာရောက်သင်ကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါသည် ...
စာရင်း ပေးသွင်းရန် - 09 - 731-75881
သင်တန်းကြေး - 350,000 kyats
2015 အတွက် RHC NE Level 1 တန်းခွဲသစ်
2015 အတွက် RHC NE Level 1 တန်းခွဲသစ်ကို 2015 Feb7မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပါမည် ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ Internet / Mobile / Telecommunication ခေတ်မှာ Computer Network Engineers များစွာလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ် ... အဲဒီအတွက် Team RHC မှ Industry လိုအပ်ချက်နဲ့ အညီ Course Outlines နဲ့ Lab များကို သေချာစွာ ရေးဆွဲထားပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိစွာ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
ဘာကြောင့် Team RHC နဲ့  Train မှာလဲ ?
၁) အချိန်ကုန် အရမ်းသက်သာခြင်း
၂) ယုံကြည်မှုအပြည့်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း
၃) Knowledge များကို တစ်စုတစည်းထဲ တစ်နေရာတည်းမှာ စနစ်တကျ လေ့လာနိုင်ခြင်း
RHC ( SINGAPORE ) : 65 - 9109 1373
RHC ( YANGON ) : 09 - 731-75881
RHC ( MANDALAY ) : 09 - 797-757-161
Labels: နည်းပညာ, ပညာရေး, အလုပ်အကိုင်